असोज ४, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार नेप्से परिसूचक २ हजार ६९८ दशमलव २४ विन्दुमा झरेको छ ।
२ हजार ८१७ दशमलव ९८ विन्दुबाट शुरु भएको बजार ११४ दशमलव शून्य २ अंक अर्थात् ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले घटेको हो ।
यो दिन कुल २२५ ओटा कम्पनीको १ लाख ७ हजार ५५६ ओटा कारोबारबाट १ करोड ७३ लाख ३० हजार ५३८ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । यो दिन कुल ८ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख १ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
सोमवार कारोबारमा आएका १३ ओटै समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से घटेको हो । सबैभन्दा बढी वित्त समूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस दिन वित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक ८ दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी विकास बैंक समूहको परिसूचक ६ दशमलव ३५ प्रतिशत र जलविद्युत समूहको परिसूचक ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको हो ।
त्यस्तै, बैंकिङ समूहको परिसूचक २ दशमलव ७ प्रतिशत, व्यापार समूहको ४ दशमलव ८ प्रतिशत, होटल एण्ड टुरिजम समूहको ४ दशमलव ७२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको ४ दशमलव ८४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको हो ।
त्यसैगरी, अन्य समूहको ३ दशमलव ८७ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको ३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको परिसूचक ५ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूहको ३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक ५ दशमलव ३९ प्रतिशत घटेको हो ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन अरुण भ्याली हाइड्रोपावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । उक्त कम्पनीको यस दिन रू. ४० करोड ६५ लाख ३१ हजारको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. ६०१ कायम भएको छ ।
कारोबार रकमकै आधारमा सर्वाधिक कारोबार हुने दोस्रो कम्पनीमा हिमालयन डिष्टिलरी रहेको छ । उक्त कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ६ हजार ६४५ मा रू. २२ करोड ५५ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
सोमवार मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेर अन्तिम शेयरमूल्य रू. ९८९ दशमलव ८० कायम भएको छ ।
यो दिन गुडविल फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, प्रोग्रेशिभ फाइनान्स, घलेम्दी हाइड्रो, हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी र युनाइटेड इदी मार्दी आरबि हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबारको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यस्तै, सिंगटी हाइड्रो इनर्जी, एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक, हिमालयन पावर पार्टनरको शेयरमूल्य रू. ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले घटेको हो ।
असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाइसकेका र ब्याजदर अझै बढ्ने अनुमान छ । बैंकहरुले आकर्षक ब्याजदर दिन थालेपछि त्यसको असर शेयर बजारसम्म आइपुगेको जानकारहरु बताउँछन् ।